Anonyanyozivikanwa online kubiridzira, Emulator.online ▷ 🥇
Nekuvandudzika kwetekinoroji, zvatinoda zvakare zviri kuwedzera kutarisana nekushandisa tekinoroji pachayo, kubva pasocial network kusvika kunetiweki, kune online kutengwa kwezvinhu zvakapusa zvehupenyu hwezuva nezuva. Saka hazvina zvazvinobatsira kuratidza kuti kunyangwe vanotsamwisa vakagadzirisa matekinoroji avo ekuti vashandisi varombo mumaoko avo. Muchokwadi, kubiridzira kwepamhepo kunotora mukana wekunzwira tsitsi, kutya uye makaro evashandisi ve Internet.
Muchikamu chino tichaongorora hutsotsi hwakapararira uye hunoshandiswa munyika yepamhepo.
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekudzivirira spam uye SMS chitsotsi
1. Zvipikirwa zvakawedzeredzwa:
vakaurayiwa vanokwezvwa kuburikidza nemitsara inoshanda senge "iro basa rakaringana wobva wadzvanya kure. Isu tinokubatsira iwe kuti uwane"KANA"Shanda pamba uye uwane mari kakapetwa kagumi!".
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa, ikozvino inomhanya Facebook Kwemamwe makore, chitsotsi che Kurambidza kwaRay Zadzisa nemufananidzo pamwe nemutengo wazvo wekutenga: zvisina musoro ichi chitsotsi chakagadzira uye chinoramba chichiita vazhinji vakaurayiwa avo, vakwezvwa nemutengo we19,99 euros, vanofarira kubaya pamufananidzo. Pane dzino zviitiko, munhu akabatwa anotungamirwa kuti atende kuti nekupa mari yakawanda kana zvitupa zvavo zvebhangi, ivo vanozokwanisa kuwana iro basa rakaringana zvisina basa kana chigadzirwa pamutengo wakaderedzwa uyo, chokwadika, hauzombosvika.
2.Mabasa ekuunganidza zvikwereti:
Panyaya iyi, akabatwa anofunga kuti nekubhadhara mari yakaenzana neperesenti yechikwereti, boka revanhu richagadzirisa zvikwereti zvese. Hapana chinogona kuva chenhema zvakanyanya, nekuti munhu anenge abatwa haazombooni zvikwereti zvake zvichigutswa, asi, zvinopesana, anozozviwana ave munyatwa yakatokura.
3. Shanda kumba:
Iwo maratidziro haagari achivanza chitsotsi, asi hazvisi zvakajairika kuti vanhu vanopa basa kubva kumba kuti vasatendeke sezvavanoratidzika.
4. "Edza mahara":
... uye yemahara saka hazvisi. Iyo michina inosimbisa kuti vanyengeri vanovimbisa kushandisa sevhisi kana kwechinguva, zvachose mahara, ipapo dambudziko richava kusakwanisika kwechinhu chekuzvinyora kubva kuhurongwa hwavakanyoresa, vachimanikidzwa kubhadhara chimwe chinhu. saka haina kufarira.
5. "Unoda chikwereti here?":
Uhu ndihwo hutsotsi hwakanyanya mukati umo vanhu vazhinji, kazhinji vatove nechikwereti, vanoramba vachidonha zvisingaite. Chaizvoizvo, iro izwi "chikwereti" rinoshandiswa zvisirizvo sezwi rakafanana rekuti chimbadzoMuchokwadi, zvinowanzoitika kuti avo vari kumashure kweizvi zvinopihwa vanokumbira mari yekuvhura maitiro vobva vanyangarika mumhepo mutete. Mukana wekuda kwezvikwereti uye mari, zvinogara zvichikurudzirwa kuti ubate anozivikanwa mabhengi masangano.
6. Kubiwa kwemazita:
Zvinosuruvarisa zvakapusa kwazvo kushandisa chitsotsi uye chakapararira kwazvo munguva yemasocial network. Iko kusununguka kwekutora kuzivikanwa kwevamwe kwakatosimbiswa, asi chakanyanya kuipa ndechekuti muzviitiko zvakawanda munhu anenge akuvadzwa anozviziva kuti anonoka. Mupfungwa iyi, kubiridzira kwechikwereti kunoitwa, kutaura zvazviri, kuri kuwedzera kuzivikanwa- Icho chitsotsi chinosanganisira kuba data rako pachako uye remari wobva warishandisa kunyorera zvikwereti kana kutenga zvinhu online; zvese kukuvadza vanotambudzwa vanogona kuve vanoziva nezve chitsotsi chete kana, semuenzaniso, ivo vachiedza kunyorera chikwereti asi vachirambidzwa nekuda kwekusabhadhara mari yakamisikidzwa nevabiridzi. Naizvozvo, zvinodikanwa kuzivisa chokwadi ichi kuzviremera uye kuenderera nechikumbiro chekuramba mashandiro acho.
7. "Wahwina € 10.000!" kana "YEMAHARA iPhone 10 yako chete kana iwe ukadzvanya pano!":
Ndiani asati amboona akafanana pop-ups pavanenge vachivhura pawebhu? Iwe unofanirwa kuyeuka kuti usambofa wadzvanya pane izvi zvinopihwa, nekuti mune yakanakisa kesi iwe unobata hutachiona nepo, pakaipisisa, mumwe munhu aigona kusora PC yako ari kure, achiba ruzivo rwese rwakakosha kuti uwane, semuenzaniso, ku maakaundi ako ebhangi. .
VERENGA ZVIMWE: Zvekuita kana iyo Internet ikati "Makorokoto, iwe wakunda"; nzira yekudzivirira kana kuivharira
8. Fonera 800 ***** uye uzive kuti ndiani waunoyemura muchivande ":
... uye zvirokwazvo kwete mafeni; Paunenge uchidana idzi nhamba, kutaura zvazviri, iyo yekubatanidza fizi yega inogona kudhura yakawanda uye zvisina kukumbirwa masevhisi anogona zvakare kubhadharisa zvisingaenzaniswi manhamba.
mune ino nyaya nguva dzose zvakanaka kuvimba nzvimbo dzepamutemo ed mvumo tenga uye tengesa paWebhu. Muchokwadi, chinonyanya kuzivikanwa uye chinozivikanwa chiratidzo, zviri nyore kuwana nzvimbo dzinoba logo uye ruzivo rwechiratidzo chiri kutaurwa, wozotumira zvigadzirwa zvakaremara kune avo vane nhamo vari pabasa kana kunyange icho chakatengwa chigadzirwa hachisi. haana kuendeswa kumugashiri. Paunopinda, webhusaiti yacho inogona kuve nechitarisiko chepakutanga, asi chokwadi chekuti zvigadzirwa zvakawanda zviri makumi mashanu kubva muzana zvinofanirwa kuridza mhere yekumuka kweinogona kuita chitsotsi.
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekutenga pa eBay kudzivisa scams
10. Bhizinesi Email Kubiridzira uye CEO Kubiridzira:
ndiwo mamwe emhando nyowani dzekubiridzira dzinonyanya kukanganisa makambani, kuburikidza nematsotsi anopinda kutaurirana kwavo kwekutengeserana nemamwe makambani, kana iwo evamaneja vekambani imwe chete uye, nemameseji enhema asi achionekwa seanotendwa nevashungurudzwa , chinja mari hombe kuti utarise maakaundi muzita revanyengeri.
VERENGA ZVIMWE: Ziva maemail ekunyepera, ekunyepedzera uye asiri echokwadi
inomuka kubva mukubatana pakati pemifungo ye "izwi" mi "Chitupa chekuziva" uye chitsotsi icho chine chinangwa chekubatanidza ruzivo rwevashandisi 'data ravo nekushandisa kwekufona kuvanyengedza.
Chiziviso chinosvika parunhare kana mubhokisi retsamba revakabiwa, zviri pachena kubva kune yavo pachavo kiredhiti institution, vachimhan'arira zvisungo zvekufungidzira zvine chekuita neakaundi yavo: mushandisi akabatwa neyevero anodzvanya pakero yeInternet yenzvimbo yakaumbwa uye pa Iyi poindi inogamuchira runhare, rwakagadzirwa nenhamba yekunyepedzera yemahara, umo vanopenga vanonyepedzera kuve vashandi vebhangi vanoda kumisa kuba uku, kana kodhi dzekuwana dzawanikwa, vanobvumidza kuendeswa kana kubhadhara kuseri kwemusungwa.
12. Kufambisa bhonasi chitsotsi:
la Ushumiri hweHurumende akashora kuti mishumo yakati wandei yasvika sei nguva pfupi yadarika, kubva kune avo vane chinangwa chekutora mukana webhonasi yekufamba pamusoro pekuvapo kwekushandisa kwakasiyana uko kunoda kunyengedza vashandisi kuburikidza nemazita anobata senge "Yekufambisa voucher 2020". Dhipatimendi rinotaurirana nezvekuti maitiro ekukumbira bhonasi anofambiswa sei kuburikidza nenzira dzepamutemo mazuva akati wandei zuva rekutumira mafomu risati rasvika Kunyorera kwekunyepedzera kwave kutaurwa nekukurumidza kune vane masimba vane masimba.
Rudzikunuro rudzi rwechitsotsi umo mavhavha anoisa malware pakombuta kana komputa system inotadzisa mukana weanobata kumafaira avo nekukumbira muripo werudzikinuro, kazhinji muchimiro chebitcoin, kuukanzura. Fake rudzikunuro misungo inogona zvakare kukuvadza zvakanyanya: yakaipisisa-kesi mamiriro rudzikunuro rwekunyepedzera kunokanganisa pfungwa yemunhu akuvara yekuchengetedzeka uye kuvanzika, uye mune imwe nzira inotyisa, vanobiridzira vanoti kuburikidza neemail kuti vakabira kamera webhu apo munhu wacho aiona firimu. zvinonyadzisira.
Iyo cam-yekushambadzira kushambadzira, inotsigirwa nekudzokororwa kweshoko remushandisi muemail, ndiyo nzira yekutsotsi: kungave iwe unotitumira isu ma bitcoins kana isu tinotumira vhidhiyo kune vese vaunosangana navo. Muchokwadi, uku kuchenesa kwakachena: vanotsotsa havana mavhidhiyo mavhidhiyo uye havana kana kubiridzira ruzivo rwako, sezvo password yavanoti vanayo yakangounganidzwa kubva kumatura anowanikwa pachena epassword uye maemail akafuridzirwa.
Pamusoro pekugara wakangwarira, nyanzvi dzinokurudzira zvinotevera:
usati waisa kadhi rako rechikwereti pane saiti, unofanirwa kuiongorora kuchengetedzeka;
Mayo tumira yavo yekupinda macode kuaccount account - mabhangi, muchokwadi, semuenzaniso, haumbobvunze zvitupa zvekubhengi zvekumba neemail kana runhare;
have kuchenjerera apo kutumirwa kwemakopi emagwaro kuchikumbirwa;
Usatorere Mayo zvinongedzo zvinosvika kuburikidza neemail kana meseji kana usina chokwadiZita kubva kumutumwa;
kune chero mhando yekusahadzika kana dambudziko gara uchibata vane masimba vanokwanisa.
Kune izvi isu tinowedzera zvakare mukana wekuti ushandise chirongwa cheAnti-Rudzikunuro kurwisa Rudzikiro hutachiona kana Crypto
VERENGA ZVIMWE: Anonyengera mawebhusaiti ane online online kubiridzira